အယ်လ်ဂျီးရီးယား: အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမှသင်၏ကျောင်းသားများကိုနားလည်ခြင်း | USAHello | USAHello
မတူကွဲပြားသောကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတျောမြားမြားပညာတတ်များသူတို့ကျောင်းသားများကိုအပေါ်အလုံအလောက်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်မခံမယူကြဘူးကြောင်းသတင်းပို့. သငျသညျဒုက္ခသည်ကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးနေတယ်ဆိုရင်, အသစ်ရောက်ရှိလာသော '' နောက်ခံသတိထားပါရန်အရေးကြီးပါသည်က. အောက်ပါအချက်အလက်များကို key ကိုပျေါလှငျခြုံငုံသုံးသပ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကျောင်းသားများကို '' ထူးခြားသောသင်ယူမှုစတိုင်များနှင့်အတူညှိ၌နေသောယဉ်ကျေးမှုတုံ့ပြန်မှုသင်ကြားမှုမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုး.
အဘိဓါန် Arabic (အရာရှိ)
ပြင်သစ်ကိုလိုနီလက်ထက်ကာလ၌, ကလေးအတော်များများပွငျသစျထဲတွင်အဓိကအားဖြင့်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ကြ. သို့သော်, လွတ်လပ်ရေး၏အချိန်မှာ 1962, အယ်လ်ဂျီးရီးယားအစိုးရကပညာရေးစနစ်ကလွှဲပြောင်းယူနှင့်၎င်း၏လူဦးရေ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကဒီဇိုင်းနှင့်ကျောင်းအပ်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်. School တွင်အသက်သားသမီးတို့အဘို့အခမဲ့မသင်မနေရဖြစ်ပါသည်6သို့ 15 အသက်အနှစ်. သို့သော်, ကြောင်းအကွာအဝေးအတွင်းသားသမီးများ၏ခန့်သာထက်ဝက်ကျောင်းမှာစာရင်းသွင်းထားပါသည်. သငျသညျအယ်လ်ဂျီးရီးယားအကြားစာတတ်မြောက်ရေးအဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲသတိထားမိစေခြင်းငှါ.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ, ပါးပေါ်အတူတူလိင်နမ်း၏ကောင်းသောမိတ်ဆွေများကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူတို့လက်လှုပ်မှဘုံက. ပိုပြီးတရားဝင်အပြန်အလှန်များအတွက်, လက်ဆွဲပိုပြီးလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၏ရိုးရှင်းညိတ်. သို့သော်, တချို့ယောက်ျားမိန်းမတို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်မှဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အဖွဲ့ဝင်များမထိရန်အဘို့အကလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး. မိသားစုဝင်တစ်ဦးတို့သည်လက်ကိုလှုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လက်တိုးချဲ့မပါဘူးဆိုရင်ဒါဟာသိရန်အရေးကြီးပါသည်.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ရင်အလွတ်သဘောဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်စကားပြော၏ Modes သာယေဘုယျအားဖြင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်. မိသားစုလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမေးပါနှင့်အထွေထွေအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မေးလျှောက်ဘုံက. အဆိုပါဖြေလျော့ပေးခြင်းသဘောသဘာဝကိုလည်းအချိန်ခံစားသက်ဆိုင်. လူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတာဝန်များကိုနှင့်သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်. ယူနိုင်ပါသည်. ကြောင့်ထိုအဦးစားပေးအချိန်ပင်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စာသင်ခန်းအခြေအနေများတွင်ထိထိရောက်ရောက်မကြည့်ရှုအားပေးစေခြင်းငှါ. သူတို့ကစာသင်ခန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှညှိနေစဉ်အတွင်းအယ်လ်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများကိုအတန်းအစားနှောင်းပိုင်းမှဖြစ်မည်အကြောင်း.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားဆက်သွယ်ရေးစတိုင်များတိုက်ရိုက်ဒါပေမယ့် Non-ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေကြသည်. အများပြည်သူဝေဖန်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏မိသားစုမှအရှက်ကွဲခြင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်အဖြစ်. ဒီကိစ္စမှာ, သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးတုံ့ပြန်ချက်ကပိုသင့်လျော်သည်. ဒါဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်, လိင်, နှင့်ဘာသာရေးကိစ္စများယုံကြည်မှုကိုတစ်ဦးနှောင်ကြိုးတည်တတ်၏သည်အထိ. စကားပြောဆိုမှု၏အထွေထွေအကြောင်းအရာများပထမဦးဆုံးမှာပိုကောင်းများမှာ, အားကစားအပါအဝင်, မိသားစု, ဂီတ, အစားအစာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားအကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသအတူတူလိင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူပျမ်းမျှအပြန်အလှန်ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ခါတိုင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ. အလင်းကိုထိထိမိမိသငျသညျကောင်းစွာတစ်စုံတစ်ဦးကိုသိမှသာလျှင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောမိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည်. စာသင်ခန်းထဲမှာ, ပိုပြီးတရားဝင်ဆက်လက်တည်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်. သို့သော်, မျက်လုံးချင်းသဘောသဘာဝအတွက်အလွန်အမင်းတိုက်ရိုက်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲလေးစားမှုလက္ခဏာသက်သေဖြစ်. စကားပြောသည့်အခါမျက်လုံးချင်းပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ကျောင်းသားများကိုသင်နားထောင်နေသိစေပါလိမ့်မယ်. တဦးတည်းရဲ့လက်ညှိုး Wagging ရိုင်းစိုင်းစဉ်းစားသည်, ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲအာရုံကိုဆွဲရန်သင့်လက်ညှိုးနှင့်အတူညွှန်ပြခြင်းထက်သင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုလက်သုံးစွဲဖို့လည်း သာ. ကောင်း၏.
မိသားစုဆက်ဆံရေးခွန်အားဖြစ်ကြ၏, နှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားမိသားစုပံ့ပိုးကူညီမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုအားထား. အယ်လ်ဂျီးရီးယားအသိုင်းအဝိုင်းများ၏တင်းကျပ်စွာဖှဲ့အသိကြောင့်တိုးချဲ့မိသားစုများနှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်အဘို့အဒါဟာဘုံဖြစ်ပါသည်. ဤသည်မိသားစုများကျောင်းသားများကို '' ဘဝအသက်တာ၌နီးကပ်စွာပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်. ထို့ကြောင့်, ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူမဆိုအထူးသဖြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းသည့်အခါ, ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေကနားလည်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှာမိသားစုဝင်များမှပြောဆိုရန်ပုံမှန်က, ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးများ. အယ်လ်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားအဘိုးအဘွားအဖြစ်ကိုကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ပညာရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်အားထက်သန်စေခြင်းငှါ.
အယ်လ်ဂျီးရီးယား၏အများစုမွတ်စလင်များမှာ, ဒါပေမဲ့တခြားလျော့နည်းလေ့ကျင့်သုံးဘာသာတရားရှိပါတယ်. မြင်သာထင်သာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုအာရပ်-ဘာဘာနှင့်ဥရောပနွယ်ဖွား၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းစတိုင်အဝတ်အစားဝယ်ယူခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်ရိုးရာဝတ်စုံများကိုလည်းဘုံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဘာသာရေးအလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်အစ္စလာမ့်အဝတ်ကဲ့သို့မိမိတို့၏ဆံပင်ဖုံးအုပ်ပိုပြီးရိုးရာအမြိုးသမီးမြားကိုမြင်ဘုံဖြစ်နိုင်သည်. အယ်လ်ဂျီးရီးယားယဉ်ကျေးမှု၌အများစုမှာလူမှုဆက်ဆံရေးမိသားစုကိုဗဟိုပြု, နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတူတကွလျော့နည်းမကြာခဏသွားလာခြင်း. ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အတွက်မိရိုးဖလာဘာသာရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားအလေ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအပြင်စာသင်ခန်းလျှောက်ထား.
hierarchical, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏အခန်းကဏ္ဍသမိုင်းကြောင်းပြောင်းလဲပါပြီ. သူတို့အစဉ်အလာအတိတ်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်နေစဉ်, အမြိုးသမီးလုပ်သားအင်အားထဲဝငျဖို့အတှကျယခုဘုံဖြစ်ပါသည်. ထိုကြောင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြောင်းကုန်ပြီ၏, သငျသညျအဆှအေမြိုးတို့တှငျအမြိုးမြိုးမျှော်မှန်းချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
အယ်လ်ဂျီးရီးယားယဉ်ကျေးမှု Cross လမ်းညွှန်
PDF အဖြစ်ဤအချက်အလက် Print
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် အယ်လ်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားနောက်ခံကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.